ဇာတ်ကားရိုက်ကူးရာကအပြန်မှာ ယာဉ်မတော်တဆမှုဖြစ်ခဲ့တဲ့ ပိုင်ဖြိုးသုတို့ဇနီးမောင်နှံ - Cele Gabar
သရုပ်ဆောင်ပိုင်နိုင်မှုအပြင် ချစ်စရာကောင်းတဲ့အပြုအမူလေးတွေကြောင့် ပရိသတ်တွေအချစ်ပိုရတာကတော့ မင်းသမီးချောလေး ပိုင်ဖြိုးသုပါ။သုသုလေးဟာဒါရိုက်တာဏကြီးနဲ့လက်ထပ်ထားတာဖြစ်ပြီး ဒါရိုက်တာကြီးရဲ့ပံ့ပိုးမှုတွေနဲ့အတူ အကောင်းဆုံးအနုပညာအရည်အချင်းတွေကြောင့် မီ ဇာတ်ကားဟာ ဟိုးလေးဝက်ဝက်ကွဲအောင်မြင်ခဲ့ပါသေးတယ်။ဒါရိုက်တာဏကြီးနဲ့သုသုတို့ရဲ့အနုပညာဖန်တီးမှုတွေကိုပရိသတ်တွေကစောင့်မျှော်နေသလို ဇာတ်ကားသစ်တွေလည်း ထပ်မံထွက်ရှိလာတော့မှာပါ။
ချစ်ခင်စမှော်ရုံဆိုတဲ့ ဇာတ်ကားကြီးကို ဒါရိုက်တာဏကြီးက ရိုက်ကူးပြီး ပိုင်ဖြိုးသုကလည်းပါဝင်သရုပ်ဆောင်ထားတာပါ။ဒီဇာတ်ကားကိုတော့ ရေနံချောင်းမှာသွားရောက်ရိုက်ကူးနေတာဖြစ်ပြီး ဇာတ်ကားရိုက်ကူးရာကအပြန်မှာတော့ ယာဉ်မတော်တဆမှုဖြစ်ခဲ့တာပါ။အဲ့ဒီအကြောင်းကိုတော့ သုသုကသူ့ရဲ့ဖေ့ဘွတ်ခ်မှာ “သုသုတို့ကိုသတင်းကြားလို့စိတ်ပူပြီးဖုန်းဆက်မေးကြသူများရှိသလို တချိူ့ကလည်းပျောက်နေတာကြာလို့ မေးနေကြသူမိတ်ဆွေများလည်းရှိတာမို့ စိတ်မပူကြဖို့အတွက် အခုfacebook ကနေအသိပေးလိုက်ပါတယ်ရှင့်….အခုဖြစ်နေတဲ့ COVID 19 ကြောင့် ကိုဏကြီးရိုက်ကူးလက်စဖြစ်တဲ့ “ချစ်ခင်စမှော်ရုံ” ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကြီးရိုက်ကူးမှုကိုရပ်နားပြီးပြန်လာတဲ့ လမ်းမှာသုသုတို့ယာဉ်မတော်တဆမှုဖြစ်ပါတယ်….
ကံကောင်းထောက်မစွာနဲ့ အရှေ့ခန်းမှာထိုင်တဲ့သုသုမန်နေဂျာနဲ့ ကားဆရာတို့ Air bagပွင့်သွားတာကြောင့်ဘာမှမဖြစ်ပါဘူး….အနောက်ခန်းမှာထိုင်တဲ့ ကိုဏကြီးနဲ့သုသုကတော့ အနည်းငယ်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရကြပါတယ်( စိုးရိမ်စရာမရှိပါ) မျက်နှာဖူးယောင်ပွန်းပဲ့ရုံ ခြေလက်အနည်းငယ်ထိခိုက်မိရုံပါ(အရိုးကျိုးတဲ့အထိမဖြစ်ပါ)….
ပြဿနာဖြစ်ချိန်မှာ ဒဏ်ရာတွေနဲ့‌သုသုတို့နှစ်ယောက်ကို ဆေးရုံပို့စစ်ဆေးပေးကြတဲ့ မသီတာနဲ့ မမီး ကားကိစ္စတွေ ရဲစခန်းမှာလိုက်ရှင်းပေးကြရုံသာမက အိမ်အထိလင်မယားနှစ်ယောက်ကိုလိုက်ပို့ပေးတဲ့ ဒေါင်းနဲ့ ကိုသားညီတို့ကိုလည်းကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်…ကျိုးပဲ့ခြင်းမရှိတဲ့အတွက် အခုလိုအချိန်မှာဆေးရုံမတက်ဖို့ဆုံးဖြတ်ပြီးအိမ်မှာသာ ဆေးသောက်အနားယူနေကြပါတယ်….”လို့ရေးသားထားတာပါ။ဒါ့အပြင်ပရိသတ်တွေ ကျန်းမာရေးဂရုစိုက်ဖို့နဲ့ ကိုယ်ခံစွမ်းအားမြှင့်တင်ပေးမဲ့ Vitamin C သောက်ဖို့နဲ့ အစာအာဟာရမျှတအောင်စားဖို့ကိုလည်း သုသုကရေးသားခဲ့ပါသေးတယ်။ယာဉ်မတော်တဆမှုဖြစ်ခဲ့ပေမယ့်လည်း ကြီးကြီးမားမာမဖြစ်ခဲ့တာကြောင့် တော်ပါသေးတယ်လို့ဆိုရမှာပါပဲနော်…